Ụbọchị My Pet » Ụbọchị My Pet dịwara Safety
Ụbọchị My Pet dịwara Safety
Online dịwara Safety Advice Atụmatụ
Online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nwere ike ịbụ a nchebe karị ahụmahụ ka omenala mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Ọ na-enye gị a wider akporo nke oke na ị pụrụ ịnọgide n'ebe dị anya, ruo mgbe ị dị njikere izute.
Ọ bụrụ na ị na mgbe gbalịrị ya n'ihu ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị na-nchegbu ọ bụla akụkọ na-ekwukarị, ebe a bụ ole na ole Atụmatụ na-ị na-akpa online n'enweghị:
Obi gị instincts. Ọ bụrụ na ihe na-adịghị nri, ya mere eburu. Disengage ùgwù, ma ọ bụrụ na nke a anaghị arụ ọrụ, dị nnọọ disengage.
Na-ya ezigbo. -Abụ ihe n'eziokwu dị ka i nwere ike mgbe na-eke gị profaịlụ, ị na-agaghị achọ ka e duhie unu n'ihi ya, anaghị na-eduhie onye ọ bụla. Ọ bụ na-esi nnọọ ike mmadụ hà na ị bụ 6'2″ mgbe unu bụ n'ezie 5'6″!
Biputere a photo, ma jide n'aka na ị na-apụghị ịmata gị na ezinụlọ gị, enyi, home ma ọ bụ ụgbọ ala na ya.
Buru akara. Adịghị enye ọ bụla onye ọmụma kwa anya ma ọ bụ post ozi nkeonwe enweghị ebe ọ maara kpọmkwem onye ị na-enye ya ndị na.
Chebe gị njirimara. Jiri a na saịtị dị ka nke anyị na odịbe gị adreesị email gị na ozi ịkpọtụrụ gị.
Zere ihe ọ bụla okwu nke ego ihe ozugbo. Ọ dịghị ihe mere ihe mere i kwesịrị mgbe igosipụta ọ bụla ego ozi online.
Unu a araba site na-arịọ maka ego enyemaka, ma mmadụ gwa gị maka ego ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-ewuli elu na-atụkwasị obi rapport na ha, ha na-fọrọ nke nta N'ezie a scammer.
Adịghị kweta inye ozi ọ bụla ma ọ bụ foto na ị na-achọghị ka na karịsịa n'ime nzute n'ihu na ị dị njikere.
Ọ bụrụ na ị na ejighị n'aka, na-arịọ maka a na-adịbeghị anya photo of onye ị na-agwa okwu.
Chegodị ihe ị dee na profaịlụ gị na mgbe akparị ụka. Ka ọ na-enye nri ụda ma ebumnuche?
-Nọgide na onye ọ bụla na-ekwu na ha agaghị anwụ anwụ hụrụ gị n'anya, karịsịa ma ọ bụrụ na ị hụtụbeghị ha.
Mgbe ị dị njikere izute, lelee anyị na-onye mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nchekwa ndụmọdụ n'okpuru
Na-Onye mkpakọrịta nwoke na nwaanyị Safety Advice
-Akpa site na online ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka nke anyị bụ a mma ahụmahụ ma na rosh obi ụtọ ọ bụ mgbe ụfọdụ mfe ichefu na-ya na ụzọ.
I chere na ị zutere online ụbọchị nke gị na nrọ ma ọ bụ ma eleghị anya, ị na-dị nnọọ ọchịchọ ịmata ma ị na-na na na ama enyịme izute. I nwere a vetiran dater ma ọ bụ ma eleghị anya-alaghachi mkpakọrịta nwoke na nwaanyị mgbe a mmekọrịta kwusiri ma ebe a bụ ụfọdụ ngwa okwu ndụmọdụ n'ihi na ihe elu:
Ekwela ka ọ eji ya a ụbọchị na-adịghị enye gị onye na kọntaktị nkọwa ma ọ bụrụ na ị na-ala ime otú ahụ. Anwakwala anwa enye n'ụlọ gị gị na ma ọ bụ ụlọ ọrụ adreesị gwụla ma ị na-kpam kpam obi ike na ị maara na pụrụ ịtụkwasị obi gị ụbọchị.
Zere onye ọ bụla nke nta banyere mmekọahụ ma ọ bụ ego tupu gị na ọbụna zutere ha. -Nọgide na onye ọ bụla na-ekwuputa-agaghị anwụ anwụ n'anya gị onwe gị kwa ngwa ngwa.
Mgbe unu zutere ndị mbụ ole na ole ụbọchị, ahọrọ a na-anọpụ iche ọha na eze na ọnọdụ na bụ nnọọ mfe ka i ma na bụ n'ime echiche na-anụ ihe anya nke ndị mmadụ ọzọ.
Gwa mmadụ na-atụkwasị onye ị na-ezute, ebe ị na-aga na ihe oge ị na-eme atụmatụ na-e. Ọ bụrụ na gị atụmatụ ịgbanwe echefula na-enye ihe update.
Ndokwa iso mmadụ 'elele na’ Mgbe ụfọdụ na-enwe a nzobe ụzọ agwa ha otú ọ na-aga, karịsịa ma ọ bụrụ na ị chọrọ enyemaka.
Obi gị instincts, ma ọ bụrụ na ị na-eche ihe dị njọ, ị kwesịrị ị na olu ọma ka ihe ngọpụ na-ahapụ.
Mgbe ịdabere na gị ụbọchị iga ma ọ bụ gị nzukọ ebe, karịsịa atụmatụ gị na-ala na mgbe unu kwesịrị ịhapụ-atụghị anya. Nwere a tagzi ọgụgụ kemfe ma ọ bụrụ na ịchọrọ otu.
Ọ bụrụ na ị ga-aga n'ụlọ ọnụ a tagzi, agbalị ka a kwụsị ha gara ma ọ dịghị ihe ọzọ ezere igosi gị ụbọchị kpọmkwem ebe i bi.
Kpachara anya na-aba n'anya ka ị nọgide wits banyere gị. Ọ bụrụ na ị na-eche gị nri ma ọ bụ ọṅụṅụ e tampered na mgbe ahụ na-adịghị aṅụ ya.
Jide n'aka na i nwere a n'ụzọ zuru ezu ebubo ekwentị na-ezu nkeji.
Akwanyere na gị ụbọchị nwere ike inwe otu nchegbu na-adịghị asọ ha eme ihe ọ bụla ha na-adịghị ala mgbe gị na.
Pita vs. Onye Mmekọ Gifting – Ònye Ga-Ị Favour?
Gịnị mere ogologo Girls Mkpapụ Shorter Okorobịa
Gị Online Social Profaili Na Na Na Na mmekọrịta gị na?